Dagaal ka dhacay Buulo-guduud 24 Dec 24, 2012 - 5:57:00 AM
Dagaalo culus ayaa maanta 24 December,2012 ka dhacay deegaanka Buulo-guduud oo waqooyi kaga beegan degmada Kismaayo, halkaasoo maalin ka hor ay la wareegeen ciidamada DF iyo kuwa caawinaya, iyadoo sidoo kale ay xiisado dagaal ka taagan yihiin deegaano dhinaca galbeed ka xiga Kismaayo.
Lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka, iyadoo dadka deegaanku ay sheegeen in hubka culus iyo midka fudud ay isku adeegsadeen dhinacyada hardamaya balse weli waxaa deegaankaas gacanta ku haya ciidamada isbahaysnaya.
Ururka Al-shabaab oo laga qabsaday deegaano badan oo ku yaala Gobolka Jubada Hoose ayaa waxay tan iyo sanadkii hore isku dayayeen inay dib u qabsadaan goobihii laga qabsaday inkastoo aysan u suurogelin.
Saraakiisha Dowlada Somalia ee ku sugan Jubada Hoose ayaa xaqiijiyay inuu dagaal ka dhacay deegaanka Buulo-guduud, balse ma aysan sheegin khasaaraha uu dhaliyay dagaalkaas; inkastoo Al-shabaab aysan weli ka hadlin dagaalka.
Goobjoogayaal ku sugan Kismaayo ayaa sheegay in ciidamada DF, kuwa Kenya iyo xoogaga Raaskambooni ay halkaas kawadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aan horay loo arkin, iyadoo intaas ku daray in ciidamo badan laga qaaday Kismaayo.
Dhanka kale Ciidamada Isbahaysanaya oo wata gaadiid dagaal ayaa waxay saakay adeen deegaano dhinac Galbeed kaga beegan Degmada Kismaayo kuwasoo ay ka mid yihiin C/la Biroole, Beer-xaano iyo Buulo-xaaji halkaasoo ay ku sugnaayeen xoogag ka tisran kuwa Al-shabaab.
Lama oga ujeedka ciidamada Isbahaysanaya iyadoo la sheegay in Al-Shabaab ay baneysay deegaanadaas iyo kuwo dhow, waxaana talaabada ay noqonaysaa mid ay ku doonayaan ciidamada isbahaysanaya inay Al-shabaab ka saaraan dhamaan deegaanada ku dhow Kismaayo.